अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीले पनि पीआर पाउँने ! - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीले पनि पीआर पाउँने !
Posted by Himalayan Kangaroo | २६ बैशाख २०७३, आईतवार ०५:५० |
मेलबर्न । अन्र्तराष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन सकेपछिको दुई वर्ष यहीँ बसेर आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाइने भएकोले अष्ट्रेलिया अहिले धेरै विद्यार्थीको रोजाईको गन्तव्य बनेको छ ।
धेरै मुलुकबाट विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया आउनुको कारण यो पनि हो । यतिखेरको अध्यागमन व्यवस्था अनुसार उच्च तह (स्नातक वा स्नातकोत्तर)को अध्ययन सकेको विद्यार्थीले दुई वर्षको ‘पोस्ट स्टडी वर्क’को समय पाउँछ । यो त्यही समय हो जतिखेर पूरै समय काममा लगाएर अध्ययनका लागि गरेको सबै लगानी उठाउन सकिन्छ ।
यहाँको पीआर अर्थात स्थायी बसोबासको अनुमति पाउँने आशामा पनि धेरै विद्यार्थीहरु यहाँ आउँने गर्दछन् । यहाँको विद्यमान कानून अनुसार विद्यार्थी भिसामा आएकाले यहाँको जनशक्ति मागको अवस्था अनुसार विभिन्न विषय र क्षेत्रमा स्थायी बसोबासको अवसर पाउँछन् । तर पीआरका लागि प्रयास गर्ने योजना हो र अष्ट्रेलिया सँधैका लागि बसोबासको थलो बनाउने हो भने त्यसको योजना नेपालबाटै बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । किनभने आफ्नो अध्ययनको क्षेत्र र रहेको सीपले नै पीआरको अवसर निर्धारण गर्दछ । त्यसैले पीआर लिएर अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने हो भने यहाँको माग अनुसारको विषय छनौट गर्नुपर्दछ । यतिखेर अष्ट्रेलियामा नर्सिङ, आइटी र अकाउन्टिङ विषयले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पीआर लिन सजिलो हुन्छ ।
पीआरलाई केन्द्रमा राख्नेहरुले अष्ट्रेलिया आइसकेपछि काममा भन्दा पनि धेरै ध्यान पढ्नमा दिनुपर्ने हुन्छ । धेरै समय र पटक–पटक फेल भएर पढिरहन नपाइने भएपनि नेपालबाट आउनेले फेल भएर लामो समय बिताउने सोच्नु भने गलत हुन्छ । किनकि जति ढिला भयो पीआरका लागि त्यति नै धेरै मुस्किल र फरक तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
Previousनेपालमा स्थिरता आउँन नदिने भारतको धम्की
Nextदुई जना पत्रकारलाई मृत्युदण्डको सजाय
बुधवारका लागि अष्ट्रेलियन डलरको दर भाउ
१ असार २०७३, बुधबार ०१:५६
अष्ट्रेलियाका जनताको सम्पत्ति शत प्रतिशतले वृद्धि
२४ असार २०७३, शुक्रबार १४:१२
४ कार्तिक २०७५, आईतवार १०:०४
अष्ट्रेलियाको नागरिकताको लागि अन्तर्वार्ता, सार्वजनिक समारोह अब सुचारु हुने
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०५:३५